१८ बर्षकि सेजलाको कोठा भित्र पस्दा यौ*नजन्य सामान देखि ला.गु औ.षध सम्म भेटिए ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 18, 2021 AdminLeaveaComment on १८ बर्षकि सेजलाको कोठा भित्र पस्दा यौ*नजन्य सामान देखि ला.गु औ.षध सम्म भेटिए ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
दमक नगरपालिका–५ स्थित एक घरमा कोठा भाडामा लिएर अध्ययन गर्दै आउनु भएकी इलामकी सेजला कोइरालाको बुधबार साँझ रहस्यमय मृ’त्यु भएको छ । प्रहरीले मृ’त्युको कारणबारे अनुसन्धान शुरु भइसकेको जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीका अनुसार सेजलालाई बेलुकी करिब ५:०० बजे साथीले मोबाइलमा सम्पर्क गरेका थिए ।
त्यसक्रममा मोबाइल नउठेपछि साथी कोठामा पुग्दा उहाँलाई शौचालयको कम्बोर्टमा बेहोस अवस्थामा भेटेको र तत्कालै लाइफ लाइन अस्पताल पु¥याइए पनि बचाउन नसकिएको साथीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रनाउ कार्कीले जानकारी दिए । घ’टना लगत्तै पी’डितका अभिभावक राति ११:०० बजे दमक आइपुगेका बताइएको छ ।
आफन्तले भने सेजलाको मृ’त्यु रहस्यमयी भएको भन्दै निष्पक्ष छानविन गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । सेजाला बसेको कोठामा पुग्दा ला.गु औ.षध देखि यौ.नजन्य क्रियाकालापको वस्तुहरु यात्रा तत्र छरिएर रहेको भेटिएको छ। सेजलाको आफन्तले उनलाई ब.न्दक बनाएर यस्तो अ.पराध गरेको आरोप लगाएका छन ।
सेजलाको कोठामा खिचिएको भिडियो यहाबाट हेर्नुहोसः